Download WhatsApp 2021 maka n'efu, LAST VERSION - Androidsis | Gam akporosis
Gam akporo, dị ka ọtụtụ n'ime gị maara, bụ sistemụ arụmọrụ kachasị eji eme ihe n'ụwa, yana oke ruru 80% nke ekwentị niile na-arụ ọrụ ugbu a, sistemụ arụmọrụ Google (Mkpụrụ Okwu) bụ onye ndu. Nke a bụ mkpa na mkpa nke budata WhatsApp maka gam akporo (o download egwuregwu, dị ka ọgọ gị nwoke ga-ekwu), ngwa ngwa ozi ngwa ngwa kachasị ewu ewu enweghị ike ịnọ na sistemụ arụmọrụ kachasị ewu ewu na ahịa.
Ya mere, ọzọ anyị chọrọ ịkụziri gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara WhatsApp maka gam akporo na otu esi enweta ọtụtụ uru na ya.
1 Olee otu WhatsApp maka gam akporo si arụ ọrụ
2 Budata WhatsApp maka gam akporo n'efu
3 Budata WhatsApp APK
4 Versionsdị WhatsApp ndị ọzọ ị nwere ike ibudata
4.1 Budata WhatsApp Plus
4.2 Budata WhatsApp GB
4.3 Budata WhatsApp aero
4.4 Download uzo WhatsApp
5 Esi melite WhatsApp maka gam akporo
6 Wụnye WhatsApp na mbadamba gam akporo
7 Etu esi wụnye WhatsApp Beta n'efu
8 Chọrọ iji nwee ike ịwụnye WhatsApp
9 Kedu igwe ekwentị agaghị enwe ike ịwụnye WhatsApp?
Olee otu WhatsApp maka gam akporo si arụ ọrụ
WhatsApp bụ ozugbo ozi ahịa dị ka ọ bụla ọzọ. Ihe dị na WhatsApp ma ọ bụ ihe ọhụụ na ụbọchị ya, bụ eziokwu na ọ na-ewe uru nke akwụkwọ ekwentị anyị iji nwee ike ịkparịta ụka na kọntaktị anyị niile n'ụzọ kachasị mfe. Mgbe anyị malitere mkparịta ụka na kọntaktị anyị ọ bụla, ngwa ahụ na-eji ohere nke WiFi anyị ma ọ bụ njikọ data mkpanaka iji zipu ozi na sava ya, na-esote, ọ ga-eziga ozi ahụ yana ozi "push" na nnata, kọntaktị ahụ anyi ahọrọla. Ozi ọma ahụ bụ na usoro a bụ naanị nzuzo na ozugbo.
Budata WhatsApp maka gam akporo n'efu
Anyị achọghị ịhapụ ohere iji chetara gị na WhatsApp bụ ugbu a ngwa anaghị akwụ ụgwọ yana ebighi ebi. Ngwa a enweghi mgbasa ozi ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla, anyị nwere ike iji ya mgbe anyị chọrọ yana otu anyị si chọọ. Naanị anyị ga-ejide ya.WhatsApp ngwa maka gam akporo na ndị ọrụ gọọmentị ọ bụla, dịka Playlọ Ahịa Google, ma ọ bụ gbaa mbọ ibudata WhatsApp maka gam akporo na Spanish ozugbo weebụsaịtị WhatsApp. Nweta njikọ gara aga anyị nwere ike ibudata WhatsApp maka gam akporo ozugbo, ọ bụrụ na anyị echeghị ka nbudata ngwa site na Playlọ Ahịa Google maka ihe ọ bụla.
Budata WhatsApp APK
Ndị ọrụ ahụ ha achọghị ibudata WhatsApp na Storelọ Ahịa PlayMaka na ha chọrọ iwelata ọnụnọ Google na ekwentị gam akporo ha, ha nwere ike ịga ụlọ ahịa ndị ọzọ, ebe ha nwere ike ibudata ngwa na ekwentị, gụnyere ngwa izipu ozi. Na ụlọ ahịa ndị a ụdị nbudata bụ ngwa.
Nwere ike tụgharịa echekwa dị ka APK Mirror, otu n'ime ihe kachasị mkpa na mpaghara a, ebe a na-ebupụta ụdị nsụgharị dị iche iche nke ngwa ahụ mana ihe kachasị mma bụ na ibudata ya na ebe nrụọrụ weebụ WhatsApp dị ka ị nwere ike lee na njikọ a. Otu uru nke APK bụ na a na-ahapụ beta na nsụgharị ndị gara aga na nke ọzọ, belụsọ na ị bụ beta beta, ị gaghị enwe ike ịnwale ekwentị.
E nwere ọtụtụ ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ibudata WhatsApp APK, mana APK Mirror bụ otu n'ime ihe kachasị mara amara, yana ịbụ otu n'ime ụlọ ahịa a tụkwasịrị obi. Mgbe ị na-emelite ngwa ahụ, ị ​​ga-ebudata APK ọhụrụ nke ejiri aka gị rụọ ọrụ wee nwee ọ enjoyụ na akụkọ ya.
Versionsdị WhatsApp ndị ọzọ ị nwere ike ibudata
Budata WhatsApp Plus
WhatsApp nwere nnukwu ndị ọrụ dị n'azụ ya, ọtụtụ n'ime ha nwere ihe ọmụma banyere mmepe na mmemme. Nke a bụ ihe kpatara ọtụtụ mgbanwe na ngwa WhatsApp ịpụta, nke a bụ kpọmkwem Whatsapp gbakwunyere, Mgbanwe nke WhatsApp nke na-enye anyị ohere, dịka ọmụmaatụ, iji zoo ọnọdụ njikọ anyị kpamkpam, hazie imepụta ma ọ bụ tinye ọrụ ndị ọ na-enweghị.
Budata WhatsApp Plus Ọ dị mfe, site na ibe weebụ ọ bụla ebe etinyere sistemụ anyị nwere ike iji uru ya na akụkọ ya niile.
Ndị ọrụ gam akporo nwere ike ibudata nsụgharị a na ekwentị ha, na-ejikwa APK. Mgbe ị na-emelite, ị ga-eji aka gị wụnye ụdị ọhụrụ ahụ, n'ihi ụdị a emelitere site na Google Play, dị ka ọ na-eme na ụdị nke ngwa ahụ.
Budata WhatsApp GB
Makwaara dị ka GBWhatsApp, ọ bụ ụdị ọzọ nke ngwa izipu ozi. Ọ bụ nsụgharị gbanwere nke na-enye ndị ọrụ ohere ịgbanwe ụfọdụ ọrụ na mpụta nke ngwa ahụ na ekwentị. Ọ bụ ezie na ụdị a kacha mara amara maka ya nyere aka melite arụmọrụ nke ngwa ahụ n'ụzọ doro anya, maka iji ya mma.
Ọ bụ nsụgharị nke na-enyekwa nhọrọ nzuzo karịa, nke bụ akụkụ ọzọ nke ndị ọrụ ji akpọrọ ihe na mgbe ụfọdụ na-efunahụ ya na ụdị ngwa ahụ. Ọ ga-ekwe ka mgbanwe nke interface, na ụfọdụ customization nhọrọ dị ka ọrụ.
Versiondị ngwa a ị nwere ike ibudata a njikọ, ebe anyi nwekwara uzo nke uzo ohuru a na-aru oru, ebe oru ohuru na mmelite di iche iche abanye n’ime ya. Ọzọ, a tọhapụrụ ya na usoro APK ma anyị ga-eji aka gị budata nsụgharị ọhụrụ ahụ, ebe ọ bụ na emeliteghị ya site na Google Play.
Budata WhatsApp aero
Ọ bụ ihe ọzọ WhatsApp mod, nke anyị nwere ike ibudata na ekwentị gam akporo anyị. Versiondị a pụtara ìhè karịsịa maka mgbanwe dị mma ọ na-eweta,, ebe ọ bụ na ọ akpan akpan agbanwe imewe nke ozi ngwa, na-eme ya anya dị ka a kpam kpam dị iche iche ngwa. Ọ bụ isi ihe ọhụrụ ma ọ bụ uru nke ụdị a gbanwere na-enye anyị.
Dị ka ọ dị na nsụgharị ndị ọzọ gbanwere, nke ndị ọrụ nwere ọrụ nke ha nwere ike hazie ngwa ahụ. Nwere ike gbanwee interface, na mgbakwunye na ịnwe ọtụtụ nhọrọ nzuzo, iji mee ka ngwa ahụ dabara onye ọrụ ọ bụla mgbe ị na-eji ya.
Ngwa nke ngwa a gbanwere enwere ike ibudata ya na njikọ a. Mgbe ị na-emelite ị jiri aka gi budata APK ọ bụla nke a na-amalite site na WhatsApp aero iji nwee ike ịnụ ụtọ ozi ọma etinyere n'ime ya.
Download uzo WhatsApp
Nke ikpeazụ nke ngwa mods egosiri dị ka nhọrọ anụ, dị ọcha, nchebe ma dị mfe iji. Enwere nhọrọ nzuzo ole na ole na ya, nke na-enye ohere ịtọ ntọala nzuzo na otu ma ọ bụ mkparịta ụka ọ bụla nwere na ngwa ahụ n'onwe ya. Nke a na-enye ohere iji ngwa ahụ eme ihe nke ọma na nchekwa.
Ha na-enyekwa ụfọdụ ọrụ dịka nwee ike izipu ozi na nọmba ọ bụlaỌbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ya na atụmatụ gị, dee ihe odide ọzọ na ọnọdụ gị ma ọ bụ mbugharị na foto profaịlụ nke kọntaktị gị. Ha bụ ọrụ anyị na-enweghị ike ịchọta na ụdị ngwa ngwa ahụ, yabụ ha na-enyekwu ya ihe, na-eme ka ọ dịkwuo ụtọ.
Enwere ike ibudata WhatsApp APK nke a na njikọ a. Dị ka ndị ọzọ nke gbanwetụrụ nsụgharị nke ngwa, ị ga-eji aka gị budata ngwa ọhụrụ ahụ oge obula enwere mmelite ohuru di. Google emelitereghi ya dika ihe eji eme ya.
Esi melite WhatsApp maka gam akporo
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata esi melite WhatsAppAnyị nwere nhọrọ abụọ doro anya iji jide nke mbipute ọhụrụ nke WhatsApp maka gam akporo.
Anyị nwere ike ịgakwuru onye na-eweta ngwa ọrụ anyị, n'okwu a ọ bụ Storelọ Ahịa Google Play, ozugbo anyị banyere ya, ọ ga-adọ anyị aka na ntị bụ ngwa ndị mmelite ha dị, ọ bụrụ na anyị ahụ WhatsApp, anyị ga-pịa naanị "melite" na ngwa ahụ budata ụdị ọhụụ dị ma wụnye na akpaghị aka.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike ịga ozugbo weebụsaịtị WhatsApp, nbudata na WhatsApp .apk Anyị nwere ike iwunye ya na folda "nbudata" anyị ma ọ ga-emelite ngwa ahụ na akpaghị aka na-enweghị ịfu data ma ọ bụ mkparịta ụka anyị.
Wụnye WhatsApp na mbadamba gam akporo
Mana ọ bụghị naanị na anyị chọrọ ịnweta WhatsApp na ekwentị gam akporo anyị, anyị chọrọ ịnwe ya ebe ọ bụla anyị gara na ngwaọrụ ọ bụla anyị bụ. Ọ bụ ya mere enwerekwa ohere iji ya WhatsApp na mbadamba gam akporo. Ohere ndị gam akporo nyere anyị maka ụdị ihe a dị ọtụtụ, yana usoro nrụnye. Ma anyị nwere mbadamba gam akporo nwere njikọ SIM ma ọ bụ ọ bụrụ naanị WiFi, anyị ga-enwe ike ịwụnye WhatsApp n'ụzọ dị mfe.
Nhọrọ mbụ bụ ịga ozugbo WhatsApp Web site na mbadamba gam akporo, mana anyị chọrọ ịga n'ihu, anyị chọrọ ịwụnye ngwa anyị WhatsApp na mbadamba gam akporo. N'ụzọ dị mwute, ihe anyị na-enweghị ike ịnwe bụ nọmba ekwentị ejikọtara na ngwaọrụ abụọ n'otu oge, mana anyị nwere ike iji nọmba ekwentị ọzọ, ma ọ bụ mebere ma ọ bụ nke dị adị, iji nweta WhatsApp na mbadamba gam akporo anyị n'efu.
Etu esi wụnye WhatsApp Beta n'efu
Ngwa ngwa ngwa ngwa ama ama nwere ụdị beta. N'ihi ya, anyị ga-enwe ike nwalee akụkọ niile na-abịa WhatsApp tupu onye ọ bụla ọzọ. Ọzọkwa, nke a bụ ihe anyị nwere ike inweta n’efu. O siri ike ịwụnye ya na ekwentị gam akporo gị, ị ga - agbaso usoro ole na ole.
Iji mee otú ahụ, ị ​​ga-enweta ya Ibe akwukwo WhatsApp Beta, nke ị nwere ike ịnweta a njikọ. Ebe a, ị ga-abanye n'ime akaụntụ Google gị wee nwee ike ịpị bọtịnụ ahụ "Bụrụnụ onye nyocha". N'ụzọ dị otu a, ị bụrụla akụkụ nke beta a.
Ihe ọzọ bụ ibudata ya kacha ọhụrụ na WhatsApp na ekwentị gam akporo gị. Mgbe ịbanyere profaịlụ nke ngwa ahụ na Storelọ Ahịa Play, ị ga-ahụ na WhatsApp Messenger (Beta) na-egosi na n'okpuru ya ga-agwa gị na ị bụlarị onye nyocha. All ị ga-eme bụ imelite ngwa. Yabụ, oge ọzọ ị banyere, ị ga-emeworị ya dịka onye nyocha beta. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịnwale ozi niile na-abịa n'ihu onye ọ bụla ọzọ.
Chọrọ iji nwee ike ịwụnye WhatsApp
WhatsApp bụ otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu na gam akporo. Agbanyeghị, ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere sistemụ ekwentị nwere ike iji ya. Dị ka enwere ọtụtụ ihe achọrọ iji wụnye ya. Requirementsfọdụ chọrọ metụtara na ụdị nke sistemụ arụmọrụ.
Dị ka ngwa ndị ọzọ, dị ka nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo na-abata, a naghị akwado nkwado maka nsụgharị ochie. Ọ na-eme na WhatsApp. N'okwu gị, iji nwee ike iji ngwa ahụ, ị ​​ga-enwerịrị mbipute hà ma ọ bụ karịa karịa Android 4.0. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ nwere ụdị dị elu. Ma, ọ bụrụ na ịnweghị ya, ị gaghị enwe ike iji ngwa ahụ.
Kedu igwe ekwentị agaghị enwe ike ịwụnye WhatsApp?
Akụkụ metụtara njikọ gara aga bụ ndepụta nke igwe na-agaghị enwe ike iwunye WhatsApp. Companylọ ọrụ ahụ na-emelite ndepụta a mgbe niile, iji zere ihe ijuanya na-adịghị mma maka ndị ọrụ. Enwere nọmba ekwentị agaghị enwe ike ịwụnye ngwa izi ozi.
Nokia S40 Ọ bụ otu n'ime ekwentị ndị a, nke ị ga - enwe ike iji ruo Disemba 31, 2018. Ya mere, ka ọ dị na Jenụwarị 1, ị gaghị enwe ike iji ma ọ bụ wụnye ngwa ahụ.
N'aka nke ọzọ, ekwentị ndị ọzọ nwere ụdị ochie nke gam akporo gụnyere. Ndi niile ụdị na Android 2.3.7 na nsụgharị ndị mbụ Ha nwere ike iji ngwa ahụ, rue February 1, 2020. Ozugbo ụbọchị ahụ gafere, ihe niile na-egosi na nkwado ahụ ga-akwụsị, ọ bụ ezie na enwetabeghị ya n'ihu ọha. Yabụ na ha agaghị enwe ike iji ya na ekwentị ha ọzọ.
Na mpụga gam akporo, anyị nwekwara ekwentị emetụtara n'okwu a, nke na-agaghị enwe ike iji WhatsApp. Dị nwere Windows Phone 8.0 na mbido nsụgharị enwekwaghị ohere na ngwa izipu ozi. Ndị nwere BlackBerry OS na BlackBerry 10 enweghị ike iji ya ọzọ. Ndepụta a na-agbasa karịa ọnwa, ya mere ejiri n'aka na a ga-agbakwunye aha ọhụrụ na ya. Y’oburu n’icho ime ihe n’oge a, i gha ahu ya na websaịtị ngwa, a njikọ.